Ny fiasan'ny rivotra iainana, inona ireo? | Fanavaozana maintso
Fausto Ramirez | | fiofanana, General
Ny fiasan'ny atmosfera dia maro sy isan-karazany Saingy mba hahatakarana bebe kokoa ny anjara asany, isika dia hianatra bebe kokoa momba ny zava-mitranga manodidina ny planetantsika.
El planeta tany amin'ny bolan'ny raharaha amin'ny fusion ao anaty habakabaka. Ny mari-pana manjaka amin'ny habakabaka dia aotra tanteraka, ary ny planeta dia mangatsiaka amin'ny faritra kely, zavatra toa ny farihy iray izay tsy azon'ny ranomandry tanteraka ny ranony. Ny hafanan'ny afovoan'ny eto an-tany mamakivaky ny crust manify hatrany izy handosirana eny amin'ny habakabaka. Ireo no fanehoan-kevitra tektonika izay miteraka horohoron-tany sy fipoahan'ny volkano.
Ireo fisehoana ireo dia hijanona fotsiny rehefa esorina ireo hafanana be loatra vokatry ny fananganana ny planeta. Ny velarantany iainantsika dia ny fisarahana eo amin'ny planeta sy ny fiainana an-habakabaka, faly ho antsika, misy atmosfera manasaraka antsika kely.
Mahita ny fepetra misy ao amin'ny izao rehetra izao, tontolo iainana matianina ihany no tohanantsika.
1 Ny tena fiasan'ny atmosfera
2 Ireo sosona samihafa amin'ny atmosfera
Ny tena fiasan'ny atmosfera
ny ny mari-pana ao amin'ny vahindanitra dia manomboka amin'ny -273 ° C ka hatramin'ny degre an-tapitrisany maro, ary ny elanelana misy eo anelanelan'ny -30 sy 60º C ihany no tohanay. Taratra mamaky ny vahindanitra ary manomboka amin'ny taratra gamma kely indrindra ka hatramin'ny onjam-peo malalaka indrindra. Ny ampahany kely indrindra amin'izy ireo ihany no tohananay, ireo izay ambonin'ireo taratra manimba, ary matetika tsy dia be loatra.
Mifanohitra amina folo farafahakeliny ny tsindry amin'ny atmosfera, ambony na ambany, ary izany dia tsy mamela antsika handeha na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta, ary amin'ny haben'ny habakabaka kokoa, izay aotra ny tsindry, na amin'ny vatana mafy orina izay ampitomboina 50 na 100.
Raha ny marina, mba hiasa ara-dalàna ny vatantsika dia mila manaraka ireo fepetra telo ireo isika, hafanana, taratra ary tsindry, ary koa rivotra iainana. Ny planeta eto an-tany Izy irery no fantatsika, mandraka ankehitriny, izay mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fomba fiainantsika ary izany dia vokatry ny fiasan'ny atmosfera.
Ireo sosona samihafa amin'ny atmosfera
Fantatsika izao hoe inona ny asan'ny atmosfera, andao jerena ireo sosona mandrafitra azy.
Mizara roa samihafa ny atmosfera miankina amin'ny firafitry ny simika sy ny mari-pana ao aminy. Ireo dia mitambatra mba hamoronana ampinga miaro izay mitazona ny fifandanjan'ny angovo ilaina amin'ny fiainana eto an-tany.
ny trangan-javatra toetr'andro Mitranga ao amin'ny sosona akaiky indrindra amin'ny masoandro, ny troposfera izy ireo. Ny fiaramanidina dia manidina ao amin'ny stratosfera misy ny sosona ozone koa. Eo ankoatr'izay dia ny sosona mangatsiaka indrindra amin'ny atmosfera, ny mesosfera, izay andefasana ny famotopotorana balaonina feno helium. Ary farany, nanjavona tsikelikely tao anaty ny thermosfera toerana.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny planeta Tany ianao? Aza adino ity lahatsoratra ity:
Curiosities of the Earth
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » General » fiofanana » Fiasan'ny atmosfera
hhhhhhh dia hoy izy:
inona ny fiasa
fafafaffa dia hoy izy:
tsy nanompo ahy mihitsy io
Mamaly an'i fafafafaffa
mneicoea dia hoy izy:
Tsy misy fivoahana mivoaka, tsy mety amin'ny zavatra tadiaviko izany
Mamaly an'i mneicoea
Afaka manampy amin'ny onja hafanana ny fanavaozana